Ihe ndekọ Redmi 7 gafere nde 20 rere | Gam akporosis
Ogologo nke Redmi Rịba ama 7 bụ ihe ịga nke ọma na ahịa. Nke a bụ ihe anyị maara maka ọnwa, mgbe ekpughere ya na Nde 15 nke ekwentị ndị a rere. Ahịa na-aga n'ihu na ọnwa ole na ole, n'ihi na ha mechara gafeela nde 20, dịka akara ndị China na-ekwupụta na netwọkụ mmekọrịta ya.
Ahịa na-ekewa n'etiti abụọ ụdị a nso: Redmi Rịba ama 7 na Rịba ama 7 Pro. Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ ekwughị ego ekwentị ọ bụla rere, mana anyị maara na ụdị nkịtị bụ otu n'ime ndị kachasị ewu ewu na ahịa, ịbụ ekwentị nke atọ kacha ere ahịa na Europe na nke abụọ nke ọnwa atọ.
Ihe doro anya bụ na anyị na-eche ihu otu n'ime usoro kachasị ewu ewu n'ụwa niile. Redmi Rịba ama 7 abụrụla otu n'ime ekwentị ndị ama ama n'etiti etiti, nwere nnukwu uru maka ego. Ihe omuma Pro abughi ihe ama ama, na-enye aka na uto nke uzo a.
Na mgbakwunye na inye aka na uto nke Xiaomi na Redmi. Karịsịa n'ahịa dịka India, ụdị ndị a na-eme nke ọma, nke na-enyere ha aka inwe oke ahịa. Phoneswom sɛ saa mfonini yi nni hɔ bio de, nanso ɛnte saa wɔ Europa.
Anyị na-akwadebe izute n'oge na-adịghị anya onye nọchiri Redmi Rịba ama 7. Ebe ọ bụ na njedebe nke ọnwa akara ndị China na-ahapụ anyị na Nkọwa 8, nke ga-abụ igwefoto igwefoto 64 MP izizi ewetara anyị ya, yabụ na-ekwe nkwa ịbụ ngwaọrụ ọzọ ga - eweta mmasị na ahịa mba ụwa.
Ka ọ dị ugbu a, anyị nwere ike ịhụ etu ahịa si aga n'ihu na-eto, yabụ anyị ga-ahụ ma Redmi Note 7 a gafere nde 25 karịa mgbe afọ gwụsịrị. Ihe doro anya bụ na bụ otu n'ime ezinụlọ kachasị ere na gam akporo gburugburu ụwa, ihe ole na ole ụdị nwere ike ịnya isi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Ihe ngosi Redmi 7 gafere nde 20
Huawei Mate 30 nwere ike ịnwe ụbọchị ngosi